QM oo digniin kasoo saartay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo go’aan cusub oo soo baxay | Xaysimo
Home War QM oo digniin kasoo saartay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo go’aan cusub oo soo...
QM oo digniin kasoo saartay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo go’aan cusub oo soo baxay
Kulan ay golaha amniga ee Qaramada Midoobay yeesheen ayaa looga hadlay arrimaha Somalia, iyadoo u coddeeyay cuna qabeynta hubka saaran Somalia in la sii dheereeyo, dheereeyo lagana hortago si xagjiriinta u adeegsadaan alaadaha hubka ee dilaaga ah.
Golaha amniga ee Qaramada Midoobay ayaa ku booriyay DF in ay sii wado ka hortaga hababka maaliyadeed ee sharci darada ah ee kooxaha mintidiinta adeegsadaan oo sanadkii hore ugu soo xarooday dhaqaale dhan $21 milyan dollar
Qaraarka Golaha amniga ee QM oo lagu ansixiyay cod dhan 13 oo ay ka aamuseen Ruushka iyo Shiinaha, ayaa mar kale xaqiijiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo mamnuucida dib u iibinta ama wareejinta wixii hub ama qalab milatari ah ee la iibiyo ama la bixiyo si ay gacan uga geystaan ​​horumarinta Ciidamada Amniga Qaranka Soomaaliya iyo waaxda amniga.
Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa weli ah kooxda ugu fir fircoon uguna adkaysiga badan qaarada Afrika, iyadoo gacanta ku haysa qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, inta badanna bartilmaameedsata godbo cayiman iyo meelaha kale ee caanka ah ee caasimada Muqdisho.
Dhowr hoobiye ayey sanadkan ku garaacday garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadka loo ilaaliyo, halkaas oo ay ku yaalliin safaaradda Mareykanka iyo howlo kale.
Warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saareen khubaro kormeeraya cunaqabateynta hubka ee ka dhanka ah Soomaaliya ayaa lagu yiri: “Khatarta Al-Shabaab ay u geysaneyso nabada, amaanka iyo xasiloonida Soomaaliya ayaa ka baxsan saameynta ay ku yeelan karto talaabada milatari ee kooxda caadiga ah”
Guddigaan ayaa sheegay in Al Shabaab ay soo aruurisay in ka badan 21 milyan oo dollar sanadkii kuna bixisay dagaalyahanno, hub iyo sirdoon. Baaritaanka waxaa lagu ogaaday in kooxda xagjirka ahi ay ku soo aruurisay ku dhowaad 13 milyan oo doolar afar daraasadood oo kala ah isbaaro “canshuur” ah oo ku taal Jubbada Hoose, baadda ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo, laba koonto bangi oo lala xiriirinayo ururinta canshuuraha laga qaado waxyaabaha laga soo dejiyo dekedda Muqdisho. iyo “sakada” oo qof kasta muslin ah ku waajin ah inuu bixiyo seko haddii ay ku waajibto.
“Golaha Ammaanku wuxuu xusayaa walaaca ay al-Shabaab ka qabto abuurista dakhliga iyo kaydinta iyo wareejinta kheyraadka.” Waxay ugu baaqeysaa dowladda Soomaaliya “inay sii wado la shaqeynta maamulada maaliyadeed ee Soomaaliya, hay’adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay iyo bulshada caalamka si loo aqoonsado, loo qiimeeyo loona yareeyo halista lacagaha la dhaqay iyo khataraha maalgelinta argagixisada. Waxay ku dhiirrigelisay dowladda inay tixgeliso barnaamij aqoonsi qaran si looga caawiyo yareynta halista” ayaa lagu yiri warbixinta.
Goluhu wuxuu cambaareeyay weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan ​​Soomaaliya iyo meelo ka baxsan, iyagoo sheegay in kooxda ay qatar weyn ku heyso nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka, Waxay sidoo kale muujisay walaac weyn oo ay ka qabto joogitaanka kooxo xiriir la leh kooxda xagjirka ah ee Daacish ee ka dagaalanta Soomaaliya.
Qaraarku wuxuu dalbayaa in waddamadu ay ka hortagaan iibinta, keenista ama wareejinta liistada waxyaabaha ay ka mid yihiin walxaha qarxa, qalabka la xiriira walxaha qarxa iyo tiknoolajiyadda la xiriira, Khatar weyn ayaa loo isticmaali karaa, in lagu soo saaro Soomaaliya aaladaha qarxa ee macmalka ah. Waxay u baahan tahay waddan kasta oo Soomaaliya u keenaya shay ku jira liiska inay ku wargeliyaan guddiga la socda cunaqabateynta Qaramada Midoobay ugu yaraan 15 maalmood ka hor faahfaahinta iyo ujeeddada iibka ama wareejinta.
Ku xigeenka safiirka Ruushka, Anna Evstigneeva, ayaa xustay in wax ka bedelka “loogu tala galay in lagu wanaajiyo cunaqabateynta hubka” lagu sameeyay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya waxayna rajo ka muujisay “in ay taageeri doonaan caadiyeynta iyo yareynta qatarta argagixisada ee ka imaaneysa, marka hore. Shabaab.
Isu-duwaha siyaasadeed ee Mareykanka Rodney Hunter wuxuu soo dhoweeyay sii socoshada cunaqabateynta Qaramada Midoobay iyo kordhinta shaqada guddiga khabiirada 12 bilood oo kale. Wuxuu sheegay in xubin kasta oo gole ka mid ah ay ka go’an tahay inay ilaaliso cunaqabateynta hubka iyadoo loo daneynayo nabad iyo xasilooni ka dhalata Soomaaliya iyo gobolka oo dhan. Si taas loo gaaro, ayuu yiri Hunter, Mareykanku wuxuu kaloo taageerayaa kordhinta xoogga ah ee looga hortagayo ka faa’iidaysiga Al Shabaab ee nidaamka maaliyadeed.”
Dowladda Somalia ayaa marar badan dadaal u gashay sidii cuna qabateynta looga qaadi lahaa Somalia si ay u gaarto yoolkeeda ah ciidamo isku filan oo la dagaalamo kooxaha xagjirka ah.